South Africa debating immunity for Zimbabwe first lady | Regator
South Africa debating immunity for Zimbabwe first lady
South African officials are debating whether to grant diplomatic immunity to Zimbabwe's first lady Grace Mugabe who is accused of assaulting a 20-year-old model in Johannesburg earlier this week. Mugabe … Click to Continue »
See more about: Grace Mugabe
Zimbabwe’s first lady will get diplomatic immunity from assault charges
The First Lady of Zimbabwe will be granted diplomatic immunity from charges she allegedly thrashed a model with an extension cord, according to a report Friday. Grace Mugabe will avoid prosecution for allegedly whacking 20-year-old ...
Zimbabwe's first lady remains out of sight several days after a young model claimed Grace Mugabe whipped her with an extension cord in a South African hotel. South African authorities … Click to Continue »
Robert Mugabe’s Wife Is Probably Going to Get Away With Beating a South African Model With an Extension Chord
In one of the tawdrier ongoing international political scandals, an alleged assault by Zimbabwe’s first lady has created a diplomatic crisis for South Africa this week. It all started on Sunday when Grace Mugabe, wife of President R...
Zimbabwe's first lady Grace Mugabe failed to appear Saturday at a summit in South Africa attended by her husband, an event overshadowed by her effort to obtain diplomatic immunity over assault allegations. The wife of President Robe...
JOHANNESBURG (Reuters) - South Africa is planning to grant diplomatic immunity to Zimbabwe first lady Grace Mugabe, allowing her to return to Harare and avoid prosecution for the alleged assault of a 20-year-old model, a government ...